China Baron OEM & ODM Serivisy (Serivisy namboarina namboarina) fanamboarana sy orinasa | Baron
Serivisy Baron OEM & ODM (Serivisy marika namboarina)
Baron no mpanamboatra sy mpamatsy popoka ambony indrindra any Shina, mitady mpaninjara manerantany izahay, ary omena ihany koa ny serivisy manokana momba ny diaper manokana. Manana fahaiza-manao matanjaka sy milina fanaovana diaper tsara indrindra izahay.
· Pataloha fanofanana zazakely sy pataloha «diaper» misintona
· Eco Pull-up diaper pataloha
Pataloha Diaper ho an'ny olon-dehibe
Pataloha Lady Diaper
Napkin Lady Sanitary
· Hamafa an-jaza
· Eco Wipe
Baron (Sina) Co. Ltd dia hita tamin'ny taona 2005. Ny orinasa dia manome serivisy feno, ao anatin'izany ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra, ny famolavolana, ny famokarana feno, ny varotra ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ary manana laza matanjaka amin'ny hatsaran'ny kalitaon'ny vokatra, ny fanavaozana ary serivisy ho an'ny mpanjifa raha afaka manome ny sanda tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika foana.
Baron dia nanangana fotodrafitrasa sy atrikasa manara-penitra izay mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena sy ny tsipika famokarana diaper zazakely 8 tena mandroso. Mampiasa fitaovana famokarana Hengchang sy Hanwei ny orinasa, izay marika marika famokarana voalohany any Sina. Milanja 100T ny fitaovana ary miantoka ny fahamarinan'ny vokatra Besuper. Ny famokarana isan-taona ankehitriny dia 800 tapitrisa pcs, izay mitovy amin'ny kaontenera 4000 40HQ.
I Baron dia nampiasa matihanina amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, izay manana traikefa 20 taona amin'ny sehatry ny diaper. Ny orinasa dia manana patanty nasionaly mihoatra ny 23 amin'ny diapers ary manokana hatrany ny fanavaozana mba hamokarana diapra zaza avo lenta.
Amin'izao fotoana izao, Baron dia nahazo mari-pankasitrahana an'ny BRC, FDA, CE, BV, ary SMETA ho an'ny orinasa ary fanamarinana SGS, ISO ary FSC ho an'ny vokatra.
Baron dia mirefy 33050 metatra toradroa, miaraka amin'ny velaran-tany 29,328.57 metatra toradroa. Toeram-pivarotana madio sy milamina mihoatra ny 90 arivo m is dia miaraka amin'ny rafitra miady amin'ny afo sy ny rafitra rivotra mba hiantohana ny fiarovana ny vokatra. Ny fametrahana ny trano fanatobiana entana dia manaraka ny fenitra fanaraha-maso ny orinasa BRC sy BV. Ny faritra fandefasana mihoatra ny 4000 metatra toradroa dia afaka mandray tranofiara 10 amin'ny fotoana iray.
Mpamatsy fitaovana manerantany
Baron dia mijery tsara ny kalitaon'ny fitaovana. Ny orinasa dia miara-miasa amin'ny mpamatsy fitaovana marobe, toy ny Sumitomo, BASF, 3M, Hankel ary orinasa iraisam-pirenena Fortune 500 hafa.
Ivotoerana fanaraha-maso kalitao
Baron dia nanao fitsapana tamin'ny akora rehetra, ary namita ny vokatra nandritra sy taorian'ny famokarana mba hanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mandritra izany fotoana izany, ny fomba fifehezana ny kalitaon'ny orinasa sy ny fitantanana dia voamarin'ny antoko fahatelo iraisam-pirenena, ao anatin'izany ny BRC, FDA, CE, ISO 90012008. Ny fitaovana fanandramana rehetra dia nojeren'ny antoko fahatelo manam-pahefana indray mandeha isan-taona.
Androany, Baron dia nahavita zava-bita maro tamin'ny vokatra teknika, ao anatin'izany ny diapera vita amin'ny volo vita amin'ny volotsangana, diapers miendrika T, diapia matevina matevina matevina, ireo vokatra ireo dia mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa tsirairay sy ny fenitry ny tsenany. Ny diaper zaza eko-biodegradable novolavolain'ny orinasa dia heverina fa manana taha ambony indrindra biodegradability eto amin'izao tontolo izao ary malaza ihany koa any amin'ny firenena mandroso toa ny USA, UK, POLAND, AUSTRAILA sns.
Nandritra ny taona maro, nanolo-tena i Baron ho lasa mpamatsy lamba an-tampon-jaza indrindra eran-tany ary hanome lanja miavaka an'ireo mpiara-miasa aminay, amin'izay hiteraka toe-javatra mandresy ho an'ny orinasa sy ny mpanjifa.
Teo aloha: OEM / ODM Factory Sleeping Diapers - Besuper Bamboo Planet Baby Diaper - Baron
Manaraka: Besuper Bamboo Planet Baby Diaper
mpanamboatra diaper namboarina
Pataloha popoka Eco misintona-up
Diaper azo ampiasaina, Famafana zazakely ho an'ny hoditra marefo, Diaper zaza vao teraka, Diaper Eco avo lenta, Diaper olon-dehibe Super Absorbency, Diaper Baby,